यस्तो छ यौन सम्पर्कका वेला महिलाले आँखा चिम्लिनुको रहस्य – Radio Miteree (Latest News)
कतिपयले आँखा बन्द नगर्न सक्छ । यदि आँखा बन्द गर्दैन भने केही न केही यौन समस्या छ भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ । त्यसो भए के यौन सम्पर्कको क्रममा महिलाले आँखा चिम्लनैपर्छ रु किन उनीहरु आँखा चिम्लन्छन् ? के छ यसको कारण ?
एक शोधका अनुसार जसै हाच्छ्यिु गरिन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै नियन्त्रण हुँदैन । हाच्छ्यु गरिरहँदा हाम्रो आँखा बन्द हुन्छ, यो स्वतस्फूर्त हुने क्रिया हो । ठिक यसैगरी महिलाहरु यौनमा चरमसुखको बेला आँखा खोल्न सक्दैनन् ।
यौन सम्पर्कका क्रममा एकाग्रता एकदमै जरुरी हुन्छ ।
आँखा खुला हुँदा बाहिरी चिज एवं आवाजले यौनप्रतिको ध्यान भंग गरिदिन्छ । त्यसैले यौन सम्पर्कका क्रममा महिलाहरु आँखा बन्द गर्छन् ।
त्यही कारण उनीहरु आँखा चिम्लन्छन् ।